Global Voices teny Malagasy » Miatrika Fanamby Vaovao Ny Politikam-Pifindra-monina Breziliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Desambra 2012 15:53 GMT 1	 · Mpanoratra Richard de Araújo Nandika (en) i Eleanor Staniforth, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Eoropa Andrefana, Aostralia, Bolivia, Brezila, Espaina, Etazonia, Japana, Kanadà, Paortiogaly, Paragoay, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà
Raha efa ela no niadian-kevitra tany Eoropa sy Etazonia ity resaka ity dia vao haingana kosa vao niha-nalaza ny lohahevitra momba ny fifindra-monina  mankany Brezila. Efa fantatra ho firenena mpandray vahiny mandra-pahatonga ny fotoana vitsivitsy izay, ny zavamisy vaovao izay niainan'ny firenena tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay no mametraka fanamby vaovao indray, ahitana fiantraikany mazava eo amin'ny toekarena, politika ivelany ary ny lalàna, izay tsy maintsy iomanan'ny fiaraha-monina sy ny fitondrana Breziliana haingana raha mivaingana ho marina ny tombana hiakaran'i Brezila eo amin'ny sehatra manerantany.
Tahaka ny firenena Amerikana hafa nozanahan'ny Eoropeana, nifanesy ny fifindramonina  avy amin'ny faritra maro teto amin'izao tontolo izao noraisin'i Brezila. Ny voalohany nanomboka tamin'ny fibodoan'ny Portiogey ny sisintany Breziliana tamin'ny taonjato XIV, narahin'ny fanondranana andevo mpiasa avy any Afrika ary taorian'ny fanafoanana ny fanandevozana  tamin'ny 1888, ny fanoloana ny Afrikana noterena hiasa ho mpifindramonina Eoropeana. Nanomboka hatreo, niova tanteraka ny fiaraha-monina Breziliana noho ny firohotr'ireo mpifindra-monina ireo, mahatonga ny isam-panjakana hanana foko sy kolontsainy ahafantarana azy manokana.
Ho an'ireo Breziliana nifindra monina nivoaka ny fireneny voalohany, dia ny firenena manodidina aloha no nandehanany, fa tsy ela dia tafapaka hatrany Etazonia, Eoropa ary Japana. Anisan'ny nahatonga ny fandaozana ny firenena ny fahakelezan'ny faravodilanitra ahafaha-miakatra ara-tsosialy, ny tsy fananan'asa ary ny fisondrotry ny vidim-piainana haingana izay nihatra tany Brezila nandritra ny taompolo 1980. Mandritra izany fotoana izany, misy ny fisian'ny tambajotra efa tafapetraka izay manamora ny fahatongavan'ireny nifindra monina ireny firenena ireny tahaka an'i Japan (izay nanorenan'ny dekasegis  fonenana) sy Portiogaly. Mitombo tahaka ny fanainga ny isan'ny Breziliana mitady fiainana tsaratsara kokoa any ivelan'ny fireneny nanomboka tamin'izany fotoana izany ary eo ho eo amin'ny 3 arivoarivo [tapitrisa] eo ny fitambarany, ka ao daholo na ny ara-dalàna na an-tsokosoko.
Amin'ny krizy ara-toekarena misy ankehitriny, maro ireo niala an-tanindrazana no niverina any Brezila, indrindra ny any amin'ny fanjakana São Paulo, Paraná ary Minas Gerais. Ny bilaogin'i Geo-Conceição  [pt] mampiseho antontanisa mahaliana mifandraika amin'ireo [sokaji-na] mpifindra-monina ireo :
Misy ny sokajim-piarahamonina Breziliana no manaraka tsara ny fizotry ny fifindra-monina io. Ohatra, Ny Sampan-draharaha Breziliana Manohana ny Fandraharahana bitika sy madinika (SEBRAE) nilaza fa nanao soniam-pifanekena  [pt] tamin'ny MRE (Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny3) hametraka fiaraha-miasa hanampiana ireo Breziliana mody an-tanindrazana :
Tamin'ny fanambaràna  [pt], vao haingana nataon'ny minisitra Moreira Franco avy ao amin'ny Sekretarian'ny Afera stratejikan'ny Prezidansan'ny Repoblika (SAE), nilaza fa efa lany andro ny lalàna momba ny fifindra-monina ka manasarotra ny fampidirana ireo mpiasa za-draharaha na manam-pahaizana, tsy afa-nanao na inona na inona tany amin'ny firenena niaviany.
Tamin'ny fihazakazahana hahazo ireo manampahaizana vahiny i Brezila dia lasa mifaninana amin'ny firenena tahaka an'i Aostralia  sy Canada, indrindra i Quebec  [fr], izay manana fandaharan'asa manao izay hanintonana ireo mpifindra-monina tena manampahaizna hameno ny tsy fahampian'ny mpiasa vokatry ny fahanteran'ny mponina. Fa Mifanohitra amin'ny any Brezila ny momba an-dry zareo voatonona, satria i Brezila dia sady tanora ny ankamaroan'ny mponina no maro rahateo satria manodidina ny 2 alinalina [200 arivoarivo] ny isany, ary tsy misy loatra ny elanelam-ponina amin'ireo firenena ireo, raha tsy isaina ireo nandao tanindrazana 3 arivoarivo izay maniry ny hiverina an-tanindrazana.
Maminavina  [pt] ny profesora amin'ny Fifandraisana Iraisampirenena Oliver Stuenkel avy ao amin'ny Fundação Getúlio Vargas amin'izay ho avy rahatrizay :
Iray amin'ny zavatra mety hitranga dia ho diso lalana indray amin'ny politika efa nataony nahatonga ny Breziliana 3 tapitrisa handao ny tanindrazana indray i Brezila: mampivondrona ny fidiram-bola ho eo am-pelatanan'ny vondron'olona tsy manana eritreritra hanao izany rariny ara-tsosialy izany. Zavatra mety hitranga hafa dia ny fahaizan'ny firnena maka lesona tamin'ny “taonan'ny firamainty ” [fotoana nisian'ny fangejana indrindra tamin'ny fitondrana miaramila tao Brezila, nanomboka ny 1968 ka hatramin'ny 1974] ary hifantoka amin'ny trosa omen'ny Breziliana nandao sy ireo nijanona an-tanindrazana, hijery ho ambonin'ny zava-drehetra ny fampianarana, ka manaraka izany avy eo ny zo hanana asa mendrika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/04/42430/
 nifanesy ny fifindramonina: http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Brazil
 fanafoanana ny fanandevozana: http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Brazil#The_end_of_slavery
 nilaza fa nanao soniam-pifanekena: http://www.agenciasebrae.com.br/noticia.kmf?canal=40&cod=19303627
 taonan'ny firamainty: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Brazil_%281964%E2%80%931985%29